We Fight We Win. -- " More than Media ": ကုလား-ဗမာ အရေးခင်းဖြစ်ဖို့ဖန်တီးနေပြီ။
တရားဥပဒေမဲ့စွာဖြင့် ဗလီများကို လိုက်ဖျက်နေကြပါသည်။ မကွေးတိုင်းကံမမြို့နယ်တွင်လည်း ဗလီကိုဖျက်ပြီးမွတ်ဆလင်ပိုင်ဆိုင်များကိုဖြိုဖျက်နေကြပါသည်။ နောက်ကွယ်က ကြံခိုင်ရေးအမတ်လောင်းပါတယ်လို့ဒေသခံများကပြောနေကြပါသည်။
နောက် ဖားကန့်မြို့နယ် စည့်ကူကျေးရွာမှာလည်း ခမရ ၁၆ က ဒုတိယဗိုလ်မှုးကြီးကျော်ကျော် ဦးဆောင်ပြီး ဘုန်းကြီးအတု ၂၀၀ ကျော်က ၁၃ ရက်နေ့ညနေ၆နာရီခွဲကစတင်ပြီး စိုင်းတောင်းဗလီကို ဆလိုက်မီးများထိုးပြီးဖြိုဖျက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
Do you know more than5millions Muslim in Burma, another ten years time it could hit more than double. Once general Tun Kyi said "Gee these guys are doing missionary work by using their own Penis" no offend to anyone. By the way, just to remind you that you and your group are not alone who love our country and fight for democracy and justice,there millions out there as well.
15 April 2012 at 01:49
ထိန်းကြ သိမ်းကြပါ- သူတို့ ထွင်တဲ့ ဂွင်ထဲ တိကနဲ ၀င်သွားမယ်- အဖြစ်အပျက် ကို အသေးစိပ် လေ့လာပြီးမှ တင်ကြပါ-
ကောင်းသော သတင်းဖြစ်ပါသည်။ များများဖျက်လေ ကောင်းလေဖြစ်ပါသည်။
ပထွေးထိလို့နာတာလား ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ် ကလားမွတ်စလင်တွေကကောင်းလို့လား ဗမာတွေသွေးထဲ သူတို့အမျိုးတွေအရောက်ပို့နေတာ မင်းအမေကိုမေးကြည့် ပထွေးထိတိုင်းနာမနေနဲ့
w3If u see the cobra and muslim,kill the muslim first.cobra can kill one but muslim can kill many innocent people.
15 April 2012 at 06:29
ကိုမိုးသီး ခင်ဗျားကိုကျနော်မေးချင်တယ် ရခိုင်ပြည်မြေပုံထဲမှာ ကလားပုံကိုထည့်ပြီးဘီဘီစီကနေကမ္ဘာကိုလိမ်ညာတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားသတင်းဘာလုပ်နေတာလဲ ??? ဒီခွေးကလားအကြောင်းတွေခင်ဗျားသိလား ?? ဒီကလားအကြောင်းတွေကျတော့ခင်ဗျားကရေးကြီးခွင်ကျယ်တင်ပြနေတယ်..ခင်ဗျားကသတင်းလုပ်စားနေတာလား?? ခင်ဗျားရဲ့အသိညာဏ်ဟာ(ဖာသေမ)တယောက်လောက်တောင်တာမသွားဘူး..ခင်ဗျားဟာ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားမဟုတ်ဘူး..ခင်ဗျားဟာကျောင်းသား ဒါပယ်မဲ့နွားကျောင်းသားပဲဖြစ်တယ်....
very good news, nobody will cry.
Kill all those Muslim
@ cftlc, u r proofing ur standard, pay attention to my words right now, do u knowasingle point that Muslims'interfering to retard the development of Myanmar or is thereathing that they create hazardous circumstances for Myanmar but instead there are so many many facts that Muslim have done for the good of Myanmar Currently also, they are serving well. Before u comment, do pursue for this specific field that u r going to criticize regarding for ur words for Muslim missionary.U know who is the one who kill the monks, who is selling our country, who is lowering our youngsters education & who is enemy of Myanmar. They are not Muslim but just Buddhist. Got it?
မြန်မာနိုင်ငံဟာ မြန်မာလူမျိုးတို့အတွက်ပဲဖြစ်ရမယ် မူဆလင်နိုင်ငံမဟုတ်ပါ မူဆလင်ဟာ လူမျိုးကိုဝါးမျိုတတ်တဲ့ စပါးကြီးလိုမြွေအမျိုးအစားပါဘဲ နည်းနည်းရရင် နဲနဲ ယူတတ်တဲလူမျိုးတွေပါဘဲ....မရှိသင့်ပါဘူး....နေဝင်းလက်ထက်ကလို အကုန်ဖမ်းပြီး ပင်လယ်ထဲမျောပြစ်သင့်ပါတယ်....
Based on Ko Moe The's post
there is an argument between Kalar and Burma. See here (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=411203322225087&set=a.139012192777536.24334.100000062695320&type=1&theater)
အကြမ်းဖက်ပြီး တခြားဘာသာ သာသနာကို စော်ကားတာကိုတော့ လက်မခံနိုင်ပါ။ ဥပဒေမဲ့ဆန်လွန်းပါသည်။
Mingala ဆိုတဲ.လင်းတ ဦးနှောက်မရှိဘူးလား တစ်ခြားကွန်မန်.ပေးတဲကောင်တွေကော ဘာကောင်တွေလဲ၊ မွတ်စလင်က တစ်လောကလုံးမှာ သန်း ၂၀၀၀ ရှိတယ် လင်းတဘာသာက ၃၀၀ ပဲရှိတာ၊ ပြီးတော. ဘယ်သူတွေက သေရဲလဲ၊
Only they will do this, Aung Zaya's Blood!!! Aung Zaya is not Hunter, butamurderer robber fucker.
Really upset about Burmese mentally !
Try to improve ur mentally before imagine to change ur country with ur dirty ones !